Himalaya Dainik » आज प्रियंका चोपडाको जन्मदिन, कसरी बनिन् स्टार ?
आज प्रियंका चोपडाको जन्मदिन, कसरी बनिन् स्टार ?
बलिउड चर्चित नायिका प्रियंका चोपडाकी आमाका अनुसार प्रियंका बाल्यकालदेखि नै निकै होसियार थिइन् र उनकी हजुरआमाको उनीमाथि निकै प्रभाव परेको छ । उनी आफ्नाे बाल्यकाल निकै खुशि तरिकाले बितेकाे बताउछिन् ।
प्रियंका जब १७ वर्षकी थिइन् तब उनका भाइ सिद्धार्थको दबा बमा उनकी आमाले प्रियंकाको घरमा भएका केही फोटो मिस इन्डिया प्रतियोगिताका लागि पठाएकी थिइन्, त्यसपछि सबैकुरा परिवर्तन हुँदै गयो ।
सन् २०१८ मा प्रियंका चोपडाले अमेरिकी गायक निक जोनससँग भव्य विवाह गरिन् । जोधपुरको उम्मेद भवन प्यालेसमा उनको विवाह चर्चाको विषय बन्यो । उनीहरुले हिन्दु र क्रिस्चियन परम्परामा विवाह गरेका छन् ।
‘बाल्यकालमा यस्तो दिन पनि थियो कि जब हाम्रो जुत्ता च्यातिन्थ्यो तब नयाँ किन्न सक्ने स्थिती नभएकाले जुत्ता सिलाएर लगाइन्थ्यो ।’
प्रियंका चोपडा फोर्ब्सको सूचीमा सुचिकृत हुने पहिलो भारतीय नायिका हुन् । सन् २०१८ को एक रिपोर्ट अनुसार उनको कुल सम्पत्ति श्रीमान् निक जोनसभन्दा धेरै थियो । एक अन्तरवार्ताको क्रममा चोपडाले आफूलाई पैसाको महत्व राम्रोसँग थाहा भएको बताएकी छिन् ।
उनले भनेकी छिन्, ‘बाल्यकालमा यस्तो दिन पनि थियो कि जब हाम्रो जुत्ता च्यातिन्थ्यो तब नयाँ किन्न सक्ने स्थिती नभएकाले जुत्ता सिलाएर लगाइन्थ्यो ।’ उनी आफुभन्दा दस बर्षका सँग विवाह गरेकि हुन् ।